प्रिन्ट र Color्ग प्रबन्ध गर्नुहोस्: RBG निर्यात गर्नुहोस् CMYK | क्रिएटिव अनलाइन
यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्छ अन-स्क्रिन र color (RGB) नेत्रहीन कागजमा जस्तै छैन (CMYK)। पठाउनु अघि अन्तिम परियोजना छाप्न हामीले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि हामी हौं निर्यात गर्दै रंग मोडको साथ फाइलहरू CMYK त्यसो कि अन्तिम रंग हामी पर्दामा देख्ने एक भन्दा सकेसम्म नजिक हुनुहोस्।
सीएमवाइकेमा पनि निर्यातलाई ध्यानमा राख्दै, त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन हाम्रो अन्तिम परिणाममा भिन्न हुन सक्छ। कागजातको प्रकार जहाँ हामी छाप्न छनौट गर्दछौं, र cart्ग कार्ट्रिजको प्रकार, अन्य पक्षहरू मध्ये जुन न्यूनतम परिमार्जन हुन सक्छ।
1 प्यानटोन रंगहरू
2 रूपान्तरण वेबसाइटहरु
4 एडोब रंग
6 रंग परीक्षण अनुरोध गर्नुहोस्
El pantone एक मानिन्छ आधारभूत उपकरण ग्राफिक डिजाइन पेशेवरहरूको लागि। यो एक l होरंगहरूको इबेरिया यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि हामीसँग इच्छित र color छ, त्यो हो, यो र color्ग सन्दर्भ छ। हामी प्रिन्ट गर्न पठाउँछौं फाईलहरू, तिनीहरू फरक प्रिन्टरहरू भए पनि, उही रंग राख्नेछ।
त्यहाँ छन् अनलाइन उपकरणहरू त्यसले तपाईंलाई प्रिन्टको लागि तपाईंको डिजाइनको रंगहरू रूपान्तरित गर्न मद्दत गर्दछ।
यो अनलाइन उपकरणको साथ तपाईं आफ्नो harmonies र रंग प्यालेटहरू सिर्जना गर्न काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक हो रंग चक्र जसमा तपाईं यसको रंग, स्याही र बत्तीहरू बीच जान सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाईंको आफ्नै संयोजनको साथ प्रयोग गर्नुहोस्.
हामीलाई हाम्रो आदर्श रंग प्राप्त गर्न मद्दत गर्न एडोबसँग आफ्नै र color्ग पा wheel्ग्रा पनि छ। यो संग एक साझा प्यालेट पुस्तकालय उपलब्ध प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रयोग गर्न र बचत गर्न यदि तपाईंसँग एउटा Adobe खाता छ भने।
यो एक छ वास्तवमै उपयोगी एक्सटेन्सन जसले तपाईंलाई वेब पृष्ठ भित्र कुनै रंग चयन गर्न अनुमति दिनेछ। हाम्रो डिजाईन प्रोग्राममा आईड्रोपर जस्तो, colorzilla हामीलाई थाहा दिन्छ एकल क्लिकको साथ रंग तुरुन्तै।
एक हुनु विस्तार, तपाइँ तपाइँको ब्राउजर को साथ डाउनलोड गर्नु पर्छ। यो दुबैका लागि उपलब्ध छ क्रोम को रूपमा फायरफक्स.
रंग परीक्षण अनुरोध गर्नुहोस्
एउटा टिप्स, यदि तपाईंलाई थाहा छैन यो अवस्थित छ भने, तपाईंलाई व्यावसायिक रूपमा मद्दत गर्न सक्दछ, भनेको छ नि: शुल्क रंग परीक्षण। यसले हामीलाई अनुमति दिनेछ कुनै समस्याबाट बच्नुहोस् र color व्यवस्थापनको साथ। धेरै प्रिन्टरहरूले तपाईका लागि कुनै समस्या बिना नै गर्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » छाप्नका लागि र Color्ग व्यवस्थापन